China Dog Crate Cage umzi-mveliso kunye nababoneleli |XINTELI
Ikhreyithi yezinja zentsimbi ibonelela ngesilwanyana sasekhaya indawo yaso ekhuselekileyo yokuphumla ngelixa ukude nekhaya
Material: Ucingo lwentsimbi yekhabhoni ephantsi
Imibala:Mnyama, Pinki, Blue
Ubungakanani: 24'',30'',36'',42'', njl.
Umphezulu:umgubo ugqunywe okanye ufakwe igalvanized
Iimpawu:I-Eco-friendly, anti-rust, iqinile, izinzileyo, yomelele, kulula ukuyicoca, iqinile kwaye ihlala ixesha elide
Ikheji yezinja yenye yazoikheji yesilwanyana.Iikheji ziyasonga nje okanye zibhijele.Kulula kakhulu ukuyifaka, akukho zixhobo ezifunekayo.Ulwakhiwo oluqinileyo luqinisekisa ukhuseleko lwenjana yakho,Umbala, ubungakanani, ipakethe inokwenziwa.
Yenziwe nge-alloy yentsimbi ehlala ixesha elide kunye nomgubo ogqunywe nge-rust resistant finish.Kulula ukudibanisa ngaphandle kwezixhobo.Inceda ukunqanda inja kwaye inciphisa ukuphazamiseka komqhubi.I-tray yomgangatho wensimbi esuswayo Inceda inja yokuthintela kunye nokunciphisa ukuphazamiseka komqhubi Kulula ukudibanisa ngaphandle kwezixhobo.
Iingcango ezimbini kwikheji nganye, enye isecaleni, enye ingaphambili.
Isinyithiikhreyithi yenjaibonelela ngesilwanyana sasekhaya ngendawo yaso ekhuselekileyo yokuphumla ngelixa ukude nekhaya
b.Ngebhokisi kunye nephalethi
Ngaphambili: IRazor Barbed Wire
Okulandelayo: Ibhokisi yeGabion eneHexagonal Wire Mesh